Tondra-drano any Fiji : “Safotra ny tanàna” · Global Voices teny Malagasy
Tondra-drano any Fiji : “Safotra ny tanàna”
Voadika ny 16 Janoary 2009 20:03 GMT
Nanomboka avy ny orana tany Fiji ny alarobia 7 janoary ary tsy nijanona izany raha tsy tafahoatra ny herinandro. Izay no izy – ary tsy mbola milamina izahay — olona valo no maty (olona telo no tsy hita popoka), manakaiky ny 10 000 ny olona rava trano omena fialofana ary maro no simba trano sy ny fambolena ary mety ho tafakatra zato tapitrisa dôlara ny fatiantoka.
Ambivitra ny rano sy ny herin'aratra. Ny fampahalalam-baovao tao an-toerana no nilaza fa mametra no fatran-drano omena ireo marariny ny toeram-pitsaboana Nadi.
Nampifantoka sary lehibe momba io ny lahatsoratra anankiroa farany navoakan'i Global Voices. Ity lahatsoratra ity dia mampiseho ny fomba fijery manokana mikasika ny tondra-drano nahatsiravina indrindra nisy hatrizay, ary an-dalana ho any amin'ny cybercafés ny mpitoraka bilaogy hanoratra ny tantarany.
Amy, mpilatsaka antsitra-po avy ao amin'ny Peace Corps, no nanoratra tamin'ny alahady 11 janoary tao amin'ny bilaogy The Island:
Manamorona ny renirano iray ny tanànanay ary matetika dia voasakan'ny rano miakatra ny lalan'ny fiara mpitatitra. Rehefa miakatra ny rano aorian'ny oram-be, dia difotra ny lalana. Oram-be = tsy tsara ho an'ny faritra misy anay. Raha ny momba ny tranoko manokana…Miantso ahy ny reniko sady toa kivikivy “Emi, oh…..Emi……ah…..Na koro sa luvu” raha adika “tondraka ny tanàna” ary lasa miaraka amin'ny tanàna ny tranoko. Noho izany, ny tena heveriko fa somary mampihomehy ihany dia vakian'ny fianakaviako ny varavarankely hamahana ny varavaram-be sao sanatria tsy misy hivoahana (raha misy loza). Miezaka izy ireo mamonjy ny fananako mialoha ny hiakaran'ny rano ao an-trano. Ny fitafiako sy ny bokiko tsara fono eo ambony fandriana ary ny sakafo kosa atao ao amin'ny trano lehibe. (Azafady, mba amelao ambina mofo aho ! )…
Manahy ny amin'ireo trano hafa ao an-tanàna aho ary mieritraritra izay hataon'ny olona rehefa tojo zava-tsarotra toy izao.
Taylar, mpilatsaka an-tsitrapo hafa avy ao amin'ny Peace Corps, no nibilaogy tao amin'ny Tropical Adventure raha niaina ny rivo-doza hitany voalohany :
…Eo an-tenantenan'ny rivo-doza trôpikaly niainako voalohany aho. Midika izany fa avy tsy misy fiatoana ny orana mandritra ny herinandro maninjitra ary mety mbola hihamafy hatrany izany. Mifofofofo sady mahery be ny rivotra ary tsy mbola nahita orana be tahaka izany aho hatrizay niainako. Soa ihany fa mafy ny biraoko. Very betsaka ihany ny tafo kanefa mbola tsy misy mitete aloha… hatramin'izao. Ary koa, mbola mizotra tsara ny fiainana. Afa-tsy ny hoe nisy alika kely maromaro ompiako ao amiko mandritra ny rivo-doza. tsy tena afaka manampy azy ireo aho kanefa mampalahelo ahy loatra ry zareo satria sady tena mbola kely no mahafatifaty aoka izany ! Sady be parasy, indrisy. Omeko sakafo izy ireo indraindray ary apetrako any an-dakozia (izay any ivelan'ny trano sady tsy misy afa-tsy fatana) kanefa te hiditra ao an-trano ihany ry zareo ary te haka hafanana hiondana ! Raha tena madio tsara ry zareo, avelako miditra ihany. Mampitsetra ny mijery azy.
Ny tena voa mafy dia ny faritra atsinanan'i Viti Levu, nosy lehibe indrindra any Fiji. Indro ny sarin'ny tanàna nalain'i Abhay Nand ary nalefan'i Ratu M Radrodro tao amin'ny bilaogy Luve i Viti .
Avy amin'ny bilaogy Luve i Viti (Zanaky Fiji) :
Mandrava ny tanànan'i Ba ny tondra-drano ary atahorana hiparitahan'ny aretina ny zaza sy ny ankizy, ny tanora sy ireo olona sisa tavela ny tanànan'i Fiji…
Zavatra tena mampalahelo izany indrindra fa hoe efa tena reraka ny ara-toekarena ao Fiji na dia tsy tamin'izao fotoana izao aza sady izy no farany ambany amin'ny ankapobeny. Ity loza ara-boajanahary nihatra tamin'ny tamin'ny 09 janoary ity no vao maika nanampy trotraka ny fahoarian'ny mponina ao Fiji.
Jonathan, terantany Amerikana monina sy mipetraka ao Fiji no nanoratra ao amin'ny Oceanic: User Experiences from the South Pacific, mahavita mandefa vaovao ao anatin'ny tondra-drano avy any Fiji lazainy ho “tsy misy fifandraisandavitra” fony izy tany New York. Sary mampiseho mpizahan-tany tavela ao anaty loza izany.
Raha ny marina, dia tsy tena miraharaha izay mpizahan-tany avy niala voly ka nietraketrahan'ny toetr'andro aho ary efa leo ny maheno tantara vaovao mikasika azy ireo. Na izany aza dia tsy mino aho fa tsy afaka hiarina i Fiji ary ho maro amin'ireo mpiala sasatra tratran’ ity rivo-doza ity angamba no tsy hiverina aty intsony. Na izany aza anefa dia tsy mbola zava-dehibe aloha izany, fa mbola amin'ny ho avy.
Mitondra zavatra mahaliana izany. Raha ny fampahalalam-baovao maro any Aostraly sy Nouvelle Zelande izay mifantoka amin'ireo mpizahantany tavela any amin'ny efitra fandraisam-bahiny sy ny toerana maro hafa any miaraka amin'ny mpandraharaha amin'ireny toerana ireny (na ireo miandry ny orana mitsahatra any amin'ny seranam-piaramanidina), inona no iraharahian'ny governemanta izay mbola manana filana hafa noho ny azy ireny ? Indro nalaina tao amin'ny bilaogin'ny governemanta, IG-Fiji.
Ankehitriny, andeha hojerena fohifohy ny mikasika ireo mpizahantany tratry ny tondra-drano aty Fiji.
Dickon Springate, avy any Royaumes Unis, eny an-dalana.
Tena tsy tiako be.
Vao nigadona teto Fiji aho izao, ilay tany nampanantenaina, teny amin'ny antsasa-dalana, Lister niaraka nandeha tamin'i Cat ary koa i Jim Carey nilalao an'i Truman Burbank izay nitady fatratra ny olon-tiany ary rehefa tonga aho… dia tondraka tanteraka ny tanàna.
Ity no tsiaron'orana ratsy indrindra hatrizay niainako, ary ankehitriny dia ho lany eto amin'ny seranam-piaramanidina ny androatokon'androko satria tsy misy lalana ahafahana mivoaka mihitsy ary vokatr'izany dia feno avokoa ny trano fandraisam-bahiny rehetra, soa ihany fa nisy vehivavy tsara fanahy mpiasan'ny seranana no nametraka ahy tany amin'ny anadahiny monina tokony ho folo minitra miala ny seranana.
Tsy misy ilana azy intsony ny fiantohana ny olona, tahaka ny antso an-tariby ataon'ny mpiasan'ny seranam-piaramanidina ary raha tsy nisy olona niresahako tao dia angamba aho voatery nijanona tao nandritra ny herinandro maninjitra, satria ny orana tsy mijanona fa vao maika milatsaka.
Avy amin'i Craig B, izay rendrika tao amin'i Coral Coast raha hiverina ny 8 janoary, taoriana kelin'ny nilatsahan'ny orana.
Tena marina fa ny rivo-doza mamely an'i Fiji dia nanondraka ny lalana avy any Nadi ka tafahitsoka tao Uprising Beach izahay. Ny zavatra nahafaly fotsiny dia hoe tsy ho main'ny masoandro aho aloha elaela. Ny mahasosotra dia hoe manafika ny moka ary tena marobe ary manana sakafo 5 tsara izy ireo (ny ranjoko, ny sandriko ary ny tendako).
Avy amin'i DrewMarie, izay tonga tamin'ny fotoan'ny tondra-drano mihitsy.
Ny andro voalohany nahatongavako no andro lava indrindra tamin'ny fiainako, sy hoe akory satria izaho ao anatin'ny “Fiji time” (andron'i Fiji) ihany, izay azoko ambara fa tsy nahafaly mihitsy. Hahay hifaly aho amin'ny manaraka, fa efa nampitandremana aho tsy handeha aty Fiji mandritra ny vanim-potoan'ny rivo-doza (ity no orana betsaka indrindra nilatsaka taty Fiji tato anatin'ny 300 taona, araka ny filazan-dry zareo). Tsy afenina fa tafahitsoka tao amin'ny trano fandraisam-bahiny iray izahay ary nivavaka mba hiainga ho any Auckland ny zotram-piaramanidina rahampitso.
Aza matahotra, natao hampihomehy fotsiny iny. (Raha tsy mahafaty ahy ity, dia mampahery ahy)
Ny vaovao tsara tamin'ireto dia niaraka tamin'ny zotra an'habakabaka mankany Fiji ireto (Fiji’s Pacific Air): tsy afaka manova ny datin'ny andro handehanana ny vahiny raha tsy mandoa vola amboniny. Ny mpitoraka bilaogy nanoratra voalohany ny mikasika io dia i Babsiga.
Tokony mba havelan'ny zotra an'habakabaka any Fiji sy ny hafa koa hanova ny andro handehanany ny olona satria tsy afenina fa tsy mety ny miala sasatra any Fiji mandritra ny vanim-potoanan'n rivo-doza. Andraso mba ho tafatoetra tsara ny fotodrafitrasa ary mba omena fotoana ny mpiasa hikarakarany ny fianakaviany sy ny fananany simban'ny rivo-doza.
Avy amin'ny fikambanana fiji-travelers (mpandeha ho any Fiji), izay tany Suva nandritra ny fotoanan'ny tondra-drano.
Soa ihany fa tsy tratry ny tondra-drano i Suva, na dia 25 minitra monja miala avy eto aminay aza i Nasouri. Nijanona ao amin'ny serana-piaramanidin'i Nasouri avokoa ny fiaramanidina rehetra. Ny tena voa mafy dia ny faritra anelanelan'i Suva sy Nadi izay adin'ny 3 raha mandeha fiara. Nadi no toerana fandehanan'ireo mpizaha tany tonga eto Fiji ary maro amin'ireo mpiala sasatra no tafahitsoka tsy afa-miala ny toerana misy azy any.
Avy foana ny orana tamin'ny herinandro lasa – mandritra ny tontolo andro isan'andro ary tamin'ny sabotsy lasa teo koa izay nifindranay trano ( tantara hafa indray izay), ny alahady sy alatsinainy dia efa tsara ny andro tao Suva. Mbola mando be foana hatramin'izao ary soa ihany fa tsy nandalo taty aminay ny rivo-doza tamin'ity herinandro ity.
Ny mahafinaritra. Tahaka ny hoe tsy dia lavitra aty Suva, kanefa raha mijery ireo sary sy miresaka amin'ireo olona niharan'ny tondra-drano, manasa-dranjo ny rano ary marobe ireo olona simba fananana. Tsy mbola azo handehanana ny lalana, saika lasan'ny rano avokoa ny ankamaroan'ny tetezana ary olona 5 no maty. Efa nanambara ry zareo fa eo amin'ny 2 volana eo vao mety ho tafaverina izany.
Ny lahatsoratra avy amin'i Brooks, mpivady teran-tany Amerikana tany Fiji nandritra ny rivo-doza :
Efa nomarihiko tamin'ny lahatsoratro teo aloha ny firaisan-kinan'ny mponina ao Fiji. Tsy afaka manao mihoatra izay azony atao aminao fotsiny izy fa raha ny tena marina dia tena tiany ny hanananao andro mahafinaritra. Manana endrika mitsikitsiky izy ireo ary misangy aminao raha hitany ianao fa tsy dia mitsiky loatra. Miala tsiny amin'ny andro ratsy niarahanay … tena izy ! Niantso ny sampan-draharaha momba ny toetr'andro i John roa andro lasa izay ary dia nalahelo ilay olona nilaza taminy fa ho avy ny orana ary ho ratsy ny andro. Androany dia tafaraka taminay tao amin'i Seranan-tsambon'i Denarau ilay olona ary niala tsiny noho ny faharatsian'ny andro nanimba ny fialan-tsasatray ary niangavy anay mba hiverina amin'ny fotoana manaraka.
10 Marsa 2020Oseania